JUNE&MAY: #မမ အတွက် ဒီသီချင်း
Posted by JuneOne at 3:35 PM
:P February 5, 2009 at 8:50 PM
အမြဲ ယူသုံးလည်း ဖြစ်ပါကြောင်း ....
khin oo may February 8, 2009 at 5:10 PM
ကျေးဇူးပါညီမ. save လုပ်သွားတယ်။ နားထောင်သွားတယ်။
WWKM February 8, 2009 at 9:21 PM
ကြာဇံ၊ထမင်းအရော နဲ့ ၀က်ဘဲဥ ... မနက်စာကို အခုမှ လာစားသွားတယ်နော်။ အကျန်လေးပဲစားသွားပါတယ်ရှင်။
မ sin က ထိပ်ဆုံးကအမြဲပဲ.. ငှင်း ငှင်း ငှင်း :P
စင်္ကာပူရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ ၂ ပတ် အပြင်မထွက်ဖို့ အမိန့်ထုတ် - စင်္ကာပူရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေနေတဲ့ တန်းလျား (Zawgyi/Unicode) စင်္ကာပူရောက် နိုင်ငံခြားသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို ၂ ပတ်ကြာ နေအိမ်အပြင်မထွက်ပဲနေကြဖို...
COVID-19 အတှကျ အနုပညာရှငျမြားစှာ ရဲ့ စုပေါငျးအလှူ - သရုပျဆောငျ ယုနျလေး၊ ထူးခွား၊ ခါရာ၊ ခွူးလေး နှငျ့ အခွား အနုပညာရှငျမြားစှာ ပူးပေါငျးပွီး ဒီကနေ့၊ ဧပွီလ (၇) ရကျနကေ့ ရနျကုနျ ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး နှငျ့ ခုတငျ (...
No Lockdown In Sweden: Everything Is Awesome! - (Katri Uibu's article from the ANC NEWS on 07 April 2020.) We should all move to Awesome Sweden! Sweden is adoptinga'flexible' coronavirus response and b...
လနျနာတိုငျးပွညျကို ရှာဖှခွေငျး ခရီးစဉျ - ဟိုးရှေးရှေးတုနျးက စပါးခငျးတှနေဲ့ စိမျးစိုပွီး ဘာသာတရားကိုငျးရှိူငျးတဲ့ အလှနျစညျပငျသာယာ ဝပွောသော လနျနာဆိုတဲ့ တိုငျးပွညျတပွညျ ရှိခဲ့ဖူးတယျ။ ဒီတိုငျးပွညျကို ...
ပုရိသများနှင့် သုက်ထွက်ရန်ကြာလွန်းတဲ့ ပြဿနာ - *ပုရိသမြားနှငျ့ သုကျထှကျရနျကွာလှနျးတဲ့ ပွဿနာ* *ရေးသားသူ *Ye Myo Myat *ဆေးပညာပိုငျးဆိုငျရာတညျးဖွတျသူ* Dr. Thurein Hlaing Win အမြိုးသားတှနေဲ့ လိငျကနျြးမာရေ...